आफ्नै छोरीलाई खु कु री देखाएर ४० बर्ष जेठो र ७ वटा सौता माथि विवाह गरिदिने यी कस्ता बाबु ? (भिडियो सहित)- – Classic Khabar
आफ्नै छोरीलाई खु कु री देखाएर ४० बर्ष जेठो र ७ वटा सौता माथि विवाह गरिदिने यी कस्ता बाबु ? (भिडियो सहित)-
May 26, 2021 170
पहिलाको जमानामा छोरीलाई सन्तानको ब्यवहार गरिन्थेन । छोरी भनेको अर्काको घर जाने जात हो भन्ने मानसिकता बुवाआमामा हुन्थ्यो । त्यस्तै अवस्थाको सामाना गरेकी एक महिला अहिले आफ्नो मृत्यु कुरेर बसेकी छन् ।
बुवाले ७ वटा सौता माथि जबरजस्ती विवाह गरिदिए । विवाह गर्न नमान्दा खुकुरी देखाएर धम्की दिए । बुवाको डरले उनी ८ औं श्रीमती बन्न पुगीन् । आफ्नो बुवा समानको उमेरको श्रीमान थिए । आफु भन्दा अगाडी ७ वटा सौता । त्यस्तो परिवारमा बुवाले धम्की दिएर विवाह गरिदिए ।
उनको श्रीमानको उमेर उनको भन्दा ४० वर्ष बढी थियो । भन्छिन् मेलाई गरेको अन्यायका कारण मेरो माइतीमा पनि कहिल्यै राम्रो भएन । सिनामंगलमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने एक महिलाको कथा हो । अहिले उनी एक्लै जिवन विताइरहेकी छन् । उनको अवस्थाको भिडियो सार्वजनिक भएपछि अहिले उनका लागि विदेशवाट सहयोग आएको गंगा लामाले बताएकी छन् । आफ्नो इच्छा विपरित विवाह गरेकी उनले जसो तसो जिवन चलाइन् ।
तर जब उनी एक्ली भइन् उनको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर भएका कारण जिवन थप कठिन भयो । सानो झुपडीमा बस्ने उनको झुपडीमा खानेकुरा केही पनि थिएन । वर्षामा पानी चुहिने समस्या एकातिर छ भने खानेकुरा जुटाउन पनि काम गर्न नसक्ने अवस्थामा उनी पुगेकी छन् ।
Prev२१ बर्षिय गर्भबती युवती बन्द कोठामा भोक भोकै, रुदै भन्छिन्- खाना नपाए पेटको बच्चा मर्छ, अब बाच्दीन होला (भिडियो सहित)
Nextहामी यसरी भोक भोक्कै कति दिन सम्म बस्ने ? सहयोगको खानेकुरा लिएर बाड्न जादा देखियो यस्तो दृश्य (भिडियो सहित)
सोती काण्डको एक वर्षः अझै ओभाएन्न नवराजको आमाको आँखा
कोरोनाले बुबाआमाको मृत्यु भएपछि ६ बर्षिय छोरीको सन्देशले संसारलाई रुवायो
एक बोतल र क्सी राखेर पञ्चसामु गायक राजेश पायल राई आ’क्र’मण गर्ने शेर्पाले मागे माफी